> Resource > Ladnaansho > Recovery Qaabka Quick: Sidee inuu ka soo kabsado ka dib markii Files Qaabka Quick
Waxaan soo kaban karto, Xogta laga My Quick formatted USB?
Hello, waxaan si dhaqso ah formatted aan USB flash PNY drive qalad ah. Hadda waxaan rabaa inuu ka soo kabsado dhammaan macluumaadka aan ka USB ah. Yaa iga caawin kara fadlan?
Haa, qaabka shil deg deg ah qalab lagu kaydiyo runtii waa madax xanuun, gaar ahaan marka aad uma aragto in aad files badan oo muhiim ah oo ku saabsan qalab. Waxaa laga yaabaa inaad la yaaban sida inuu ka soo kabsado xogta ka dib qaab deg deg ah. Laakiin ma u adag yahay sida aad la rogmato lahaa. Runta waxa ay tahay in aad xogta formatted weli waa qalab aad kaydinta ilaa files cusub u overwrite.
Sidaas, waxaad u baahan tahay in aad joojiso gelinaya macluumaadka cusub si ay u qalab lagu kaydiyo formatted iyo raadiyo barnaamij qaab bogsasho degdeg ah si ay kuu caawiyaan. Halkan waa waxa aan jeclaan lahaa in aan ku talinaynaa in aad u: Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac . Tani barnaamij deg deg ah qaab kabashada taageertaa dhammaan aaladaha kaydinta, oo ay ku jiraan computer, drive dibadda adag, USB flash drive, kaadhka xusuusta, drive qalinka, iwm kaliya aad u baahan tahay si ay u qabtaan qaar ka mid ah qasabno fudud dib u soo ceshano aad sawiro formatted, videos, files audio, waraaqaha iyo in ka badan iyada oo la isticmaalo qalab la yaab leh.
Hel version tijaabo ah Wondershare Data Recovery hadda. Fadlan kala soo bixi version saxda ah ee computer.
3 Talaabada inuu ka soo kabsado ka dib markii Data Qaabka Quick
Haddaba ee loo farsameeyo qaab bogsasho degdeg ah la Windows version of Wondershare Data Recovery. Haddii aad isticmaalayso Mac ah, waxaad samayn kartaa dib u soo kabashada ee talaabooyin la mid ah la version Mac.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada ah si ay u bilaabaan
Ku rakib iyo abuurtaan Wondershare Data Recovery on your computer, waxaad heli doontaa daaqad ku taxan saddex hababka soo kabashada: "lumay Recovery File", "Recovery ah Barzakh," iyo "Recovery File ceeriin ah".
Si aad u soo ceshano xogta ka dib qaab deg deg ah, aynu dooro "lumay Recovery File" wada.
Tallaabada 2 Scan xogta formatted
Halkan barnaamijka tusi doono oo dhan qoruhu on your computer, oo ay ku jiraan qalab lagu kaydiyo dibadda xiran. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan mid ka mid ah in aad si degdeg ah formatted oo guji "Start" in iskaan xogta laga badiyay waxaa ku.
Fadlan dooro "Enable Deep Scan" doorasho ee suuqa kala barnaamijka.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad soo kabsado xogta ka qalab degdeg ah formatted dibadda kaydinta, fadlan hubi in uu in si wanaagsan loo-xiran kartaa adiga oo computer la sameeyo.
Tallaabada 3 Ladnaansho xogta ka dib qaab deg deg ah
Dhammaan xogta recoverable lagu soo bandhigi doonaa "Nooca File" ama "Jidka" category. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in la doorto, kuwaas oo faylasha aad doonaysid in aad dib u hanato oo guji "Ladnaansho" badhanka si ay u badbaadin on your computer.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha sii files dib ay goobta asalka ah inta lagu guda jiro dib u soo kabashada.
Sidee inuu ka soo kabsado Digital Camera Photo on Mac
5 siyaabo inuu ka soo kabsado faylasha aad lumay drive qalin